တရုတ်သွားဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်း, သွားဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်း, သွားဘက်ဆိုင်ရာ implants, Crown ပြီးတော့တံတား - Foo Tian
သတ္တုဖို့ fused ကြွေ
သာအီးသုံးပါသို့မဟုတ် FDA ကပစ္စည်းများအတည်ပြု
CAD သည် CAM implants
အဲဒီအစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်အပြည့်အဝမဟာ implants တံတား၏သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံမှာများအတွက် ချ. ၏ကျနော်တို့ CAD သည် CAM လမ်းအတွက်အပြည့်အဝမဟာ implants တံတား၏သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံမှာပါစေ, ကပိုမိုမြင့်မားတိများနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာအောင်နိုင်သည့်ကြိတ်စက်ဖြင့်ဆန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲမဆိုအလွန်သေးငယ်သောချိန်ညှိခြင်းမရှိဘဲဿုံ fit အဖြစ်ကပိုပြီးတိကျဖွစျဖို့ထွက်လှည့်။
CAD သည် CAM Malo အပြည့်အဝ Arch implants တံတား
CAD သည် CAM Malo implants တံတား
အပြည့်အဝ Arch Zirconia implants တံတား
အပြည့်အဝ Arch implants တံတား
အားလုံး CAD သည် CAM implants View
ဝက်အူဒီဂျစ်တယ်စကင်ဖိုင်တွေနဲ့အတူလုပ် implants ဦးရစ်သရဖူထိန်းသိမ်းထား။ ကျနော်တို့သမားရိုးကျလမ်းအတွက်သရဖူနှင့်တံတားများစေနိုင်သည်သာမက, ဒါပေမယ့်လည်းဒစ်ဂျစ်တယ်စကင်ဖိုင်တွေနဲ့အတူအဆင့်မြင့်လမ်းအတွက်ပါစေနိုင်ပါတယ်။ ဆရာသူတို့သည်အစဉ်မပြတ်လုပ်ပေးတူသောဆီလီကွန်တွေ့ကြုံယူဖို့လိုအပ်ပေမယ့်မှသာလူနာရဲ့ပါးစပ်ကနေ scan ကဖိုင်တွေကို ယူ. , လူနာသူတို့ရဲ့ပါးစပ်အတွင်းပိုင်းကိုထားကြီးတွေဆီလီကွန်စှဲဗူးခွံများမည်မဟုတ်ကြဘူးအဖြစ်ဤဆရာနှင့်လူနာနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသည်။
မော်ဒယ်ပြီးတော့ရလဒ်ပြသမှု Scan ကို
အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပါးစပ် Scan ကို
ဆော့ဖျဝဲ / ဒီဇိုင်း
ပွင့်လင်း Tray ထဲမှာ
သငျသညျမညီမညာဖြစ်နေသောအံသွားခံစားနေရပြီးနှင့်သင့်အံသွားကိုပြသလည်းရှက်နေကြသနည်း သငျသညျစုံလင်ပင်အံသွားချင်ပါသလား? အခုတော့ရှန်ကျန်းတရုတ်ထံမှ Foo Tian သွားဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းဖြင့်ပွင့်လင်းဗန်းကိုသင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါပွင့်လင်းဗန်းကုသမှုတစ်ခုမေးရိုးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်သွားဆရာဝန်ကပါဝင်ပတ်သက်, ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာ-based စနစ်များနှင့်တကွ, လူတစ်ဦးမိမိကိုယ်ကို, တစ်ဦးဒစ်ဂျစ်တယ်သွားစကင်ခြင်းရန်အသုံးပြုသည့်လူနာရဲ့သွားတွေ, တစ်ဦးမှိုယူ။ အဆိုပါကွန်ပျူတာမော်ဒယ်လက်ရှိနှင့်တပ်မက်လိုချင်သောအသွားများရာထူးအကြားအဆင့်ဆင့်အကြံပြုနှင့်ဗူးခွံတစ်ခုစီကိုစင်ပေါ်မှာဖန်တီးနေကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အသီးအသီးပွင့်လင်းဗန်းအခြားနှင့်အတူကအစားထိုးရန်ပြီးတော့, 1 သို့မဟုတ်2ပတ်ကြာ weared ရပါမည်။ အားလုံးဗန်းဝတ်ဆင်ပြီးနောက်, ထို့နောက်သင်သည်စုံလင်သောအပြုံးနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်နောက်ဆုံးရလဒ်နှင့်ပင်အံသွားရလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသူတို့ကိုပိုပြီးသတိပညာသတ္တုဆီကိုဦးထက်စေသည်ဖြစ်သောလုံးဝပွင့်လင်းပါတယ်။ ပြည်သူ့များသောအားဖြင့်သူတို့ကိုသတိပြုမိကြဘူး။
အခုတော့ရှန်ကျန်းတရုတ်ထံမှ Foo Tian သွားဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းဖြင့်ပွင့်လင်းဗန်းကိုသင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးက zirconia ဦးရစ်သရဖူ All-ကြွေ crownwhich တစ်လူကြိုက်များအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ toothwhich ၏အသွင်အပြင်စွန်းဖြစ်လာသို့မဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာအနာထားပါတယ်တိုးတက်စေရန်အသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကတာရှည်ခံဝတ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးရှည်လျားတည်မြဲဖြစ်ကြသည်။
ဇာကွန်နီယမ် Crown ရိုးရာသွားဘက်ဆိုင်ရာဘိလပ်မြေအသုံးပြုခြင်း Fixed ခံရနိုင်သလား
အပြည့်အဝပုံ Zirconia သရဖူ
non-prep E-max ကို veneers
Zirconia အဆိုပါ gingival ဧရိယာတဝိုက်ညိုမည်းလာနေသည်ကိုကာကွယ်တားဆီးရာ, သတ္တု-အခမဲ့
ဖွင့်ပါ: 8:30 AM - ပိတ်: 20:00 pm တွင်
ရှန်ကျန်းတရုတ်တည်ရှိသော foo Tian သွားဘက်ဆိုင်ရာ Lab မှ, 100 ကျော်ပညာရှင်များနှင့်အတူအပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုသွားဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းဖြစ်ပါတယ်။
E-mail ကို: footiandentallab@hotmail.com
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-18312588869
သငျသညျသှား Extract အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ ...
အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုတရုတ် သွားဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်း & အခမဲ့သင်္ဘောနှင့်အတူ
acrylic သှားတုဆိုသညျမှာကွေး, အားလုံးကြွေပြန်လည်ထူထောင်ရေး, ကြွေလုပ်ကွက်, Built In Micro Motor, Woodworking Machine, Dental Instruments,